amụma nzuzo - Amụma Nzuzo
Nke Nrụgide Ibu Ibu Na Akụkọ Nyocha Nyocha Nri Ndị Nweta Atụmatụ & Ndụmọdụ Ọrụ & Ego Rentzụ Ụmụ Ejiji News
Anyị ji nzuzo gị kpọrọ ihe.
Weebụsaịtị a ga -echekwa ozi gbasara mmasị gị na kọmputa nke gị n'ime obere faịlụ akpọrọ kuki. Kuki bụ obere mpempe data webụsaịtị na -ajụ ihe nchọgharị gị ka ọ chekwaa na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka gị. Kuki na -enye ohere webụsaịtị ahụ ka ọ cheta omume gị ma ọ bụ mmasị gị ka oge na -aga.
Ị nwere ike ihichapụ kuki niile dịla na kọmputa gị, ma ị nwere ike ịtọ ọtụtụ ihe nchọgharị iji gbochie ka etinye ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịme nke a, ịnwere ike iji aka dozie ụfọdụ mmasị oge ọ bụla ị gara na saịtị, yana ụfọdụ ọrụ na arụ ọrụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ.
Imirikiti ihe nchọgharị na -akwado kuki, mana ị nwere ike ịtọ ihe nchọgharị gị ka ọ jụ ha ma nwee ike ihichapụ ya mgbe ọ bụla masịrị gị. Ị nwere ike ịchọta ntuziaka Ebe a maka otu ị ga -esi eme nke ahụ na ihe nchọgharị dị iche iche.
Weebụsaịtị a na -eji kuki iji:
1) Chọpụta gị dị ka onye ọrụ na -alọta na ịgụta nleta gị na nyocha ọnụ ọgụgụ okporo ụzọ
2) Cheta mmasị ngosi ngosi gị (dị ka ma ị masịrị nkwupụta iji gosipụta ihe niile dara ada ma ọ bụ na ọ masịghị)
4) Nye atụmatụ ojiji ndị ọzọ, gụnyere nsuso ma ị nyela nkwenye gị na kuki
Ịme kuki adịghị mkpa maka weebụsaịtị ka ọ rụọ ọrụ mana ọ ga -enye gị ahụmịhe nchọgharị ka mma.
Ejighị ozi metụtara kuki iji mata gị onwe gị, ejighịkwa ya maka ebumnuche ọ bụla ọzọ karịa nke akọwapụtara ebe a.
ọgwụgwọ ụlọ na-eto eto ngwa ngwa ma sie ike
Enwere ike ịnwe ụdị kuki ndị ọzọ emepụtara mgbe ị gara na webụsaịtị a. Saịtị a na -eji nchịkọta Google, ọrụ nchịkọta weebụ ama ama nke na -eji kuki iji nyere aka nyochaa otu ndị ọrụ si eji saịtị ahụ. Ozi nke kuki mepụtara maka iji webụsaịtị a (gụnyere adreesị IP gị) ga -ebufe Google ma chekwaa ya na sava dị na United States. Google ga -eji ozi a maka ebumnuche ịtụle ojiji nke webụsaịtị ndị ọzọ, chịkọta akụkọ gbasara ọrụ webụsaịtị, yana ịnye ọrụ ndị ọzọ metụtara ọrụ weebụsaịtị yana ojiji ịntanetị. Google nwekwara ike nyefee ozi a n'aka ndị ọzọ ebe iwu chọrọ ka eme ya, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ dị otu a na -ahazi ozi n'aha Google. Google na -agba mbọ na ya agaghị ejikọ adreesị IP gị na data ọ bụla Google nwere.
Saịtị a nwere ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ na-enye gị mgbasa ozi mgbe ị gara. Ụlọ ọrụ ndị a nwere ike ịchekwa ozi gbasara nleta gị ebe a yana weebụsaịtị ndị ọzọ iji nye gị mgbasa ozi dị mkpa gbasara ngwaahịa na ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ha mara mgbasa ozi egosipụtara gị mgbe ị na -eleta saịtị a, ha nwere ike kpachara anya ka ha ghara igosi gị otu ndị ahụ ugboro ugboro.
ọgwụgwọ ndi ozo maka uto ntutu na oke
Ụlọ ọrụ ndị a nwere ike were kuki na ihe nchọpụta ndị ọzọ iji kpokọta ozi na -atụle ịdị irè mgbasa ozi. A naghị amata ozi a n'onwe ya belụsọ, dịka ọmụmaatụ, ị nyere ha ozi amata onwe gị site na mgbasa ozi ma ọ bụ ozi email.
Ha anaghị ejikọ mmekọrịta gị na saịtị ejikọtara ọnụ na njirimara gị n'inye gị mgbasa ozi dabere na mmasị.
Saịtị a anaghị enye ozi mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ saịtị ndị ọzọ. Ndị mgbasa ozi na ndị ọzọ ndị ọzọ (gụnyere netwọ mgbasa ozi, ụlọ ọrụ na-enye mgbasa ozi, yana ndị na-enye ọrụ ndị ọzọ ha nwere ike iji) nwere ike iche na ndị ọrụ na-emekọrịta ma ọ bụ pịa na mgbasa ozi ahaziri iche ma ọ bụ ọdịnaya bụ akụkụ nke mgbasa ozi ma ọ bụ ọdịnaya. na -eche ihu (dịka ọmụmaatụ, ndị na -agụ na Pacific Northwest ndị na -agụ ụdị akụkọ ụfọdụ). Ọzọkwa, ụfọdụ kuki ndị ọzọ nwere ike nye ha ozi gbasara gị (dịka saịtị ebe egosiri gị mgbasa ozi ma ọ bụ ozi igwe mmadụ) site na ntanetị na ntanetị ha nwere ike iji nye gị mgbasa ozi dị mkpa yana bara uru.
Iji mụtakwuo maka nhọrọ ndị ị nwere gbasara ịmachi mkpokọta ozi site na netwọk mgbasa ozi ndị ọzọ, ị nwere ike ịga na webụsaịtị nke Initiative Mgbasa Ozi netwọkụ .
Ị nwere ike ịpụ na isonye na netwọk mgbasa ozi nwere mmasị, mana ịpụ apụ apụtaghị na ị gaghị enwetakwa mgbasa ozi n'ịntanetị. Ọ pụtara na ụlọ ọrụ ndị ị họọrọ agaghịzị ahazi mgbasa ozi dabere n'ọdịmma gị yana usoro ojiji weebụ site na iji teknụzụ dabere kuki.
Saịtị a jikọtara na CMI Marketing, Inc., d/b/a CafeMedia (CafeMedia) maka ebumnuche nke ịtụkwasị mgbasa ozi na saịtị , yana CafeMedia ga -anakọta ma jiri data ụfọdụ maka ebumnuche mgbasa ozi. Iji mụtakwuo maka ojiji data CafeMedia, pịa ebe a www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-policy
Saịtị a anaghị ere, gbazite, ma ọ bụ ekpughere ndị ọzọ ozi nke anakọtara ebe a, ewezuga ndị a:
(a) Ndị na -enye ọrụ mmekọ: Saịtị a nwere nkwekọrịta na ndị na -enye ọrụ mmekọ dị iche iche iji mee ka ọrụ saịtị ahụ dị mfe. Dịka ọmụmaatụ, saịtị ahụ nwere ike ịkekọrịta ozi kaadị kredit gị na onye na -ahụ maka kaadị kredit iji hazie nzụta gị. Ndị niile na -ahụ maka ọrụ nhazi nke saịtị a na -achọ ka ha nwee otu ọkwa nchekwa dị ka saịtị a na -eme, yabụ na a ga -ejikwa ozi nlekọta otu ọkwa gị. Ọzọkwa, dịka ọmụmaatụ, saịtị a nwere ike iji ọrụ nyocha ma ọ bụ ahịa dị ka Google Analytics, Google Adsense, Taboola, ma ọ bụ RevContent, nke nchịkọta nke ị nabatara na -enweghị nkwekọrịta.
(b) Ebe iwu chọrọ: Saịtị a nwere ike ịkekọrịta ozi anakọtara ebe iwu chọrọ, ọkachasị na nzaghachi sitere n'aka ndị ọrụ gọọmentị ebe ụdị arịrịọ a ruru ihe iwu chọrọ.
(c) Nchịkọta ọnụ ọgụgụ: Saịtị a nwere ike ịkekọrịta Ozi Nkeonwe na ozi agbakọtara na ndị ọzọ, gụnyere mana ejedebeghị maka mgbasa ozi ma ọ bụ ebumnuche ahịa. Agaghị ekekọrịta Ozi Nkeonwe n'otu a.
ụzọ kachasị mma maka ntutu isi
(d) Azụmahịa: na njikọ, ma ọ bụ n'oge mkparịta ụka, njikọ ọ bụla, ire akụ ụlọ ọrụ, ego ma ọ bụ nnweta, ma ọ bụ n'ọnọdụ ọ bụla ebe enwere ike ikpughere ma ọ bụ bufee ozi nkeonwe dị ka akụ azụmaahịa.
Otu esi apụ na mgbasa ozi dabere na mmasị
Ịpụ na ọrụ mgbasa ozi dabere na mmasị : Weebụsaịtị a bụ onye otu Initiative Mgbasa Ozi netwọkụ (NAI) ma na -agbaso Koodu Omume NAI dị ka akọwara na webụsaịtị NAI. Ebe nrụọrụ weebụ a na-esokwa na Digital Advertising Alliance (DAA) Principles Principles. Maka nkọwa nke Mmemme DAA, biko gaa na Weebụsaịtị DAA .
Ịpụ na mgbasa ozi dabere na mmasị site n'aka ndị ọzọ : Iji chọtakwuo gbasara mgbasa ozi dabere na mmasị na ịntanetị yana otu esi apụ na nchịkọta ozi maka ebumnuche a site na ụlọ ọrụ ndị sonyere na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi ma ọ bụ Njikọ Mgbasa Ozi Dijitalụ, gaa Ibe wepu aha NAI ma ọ bụ Ibe Nhọrọ Ndị Ahịa DAA .
Categories Atụmatụ & Ndụmọdụ Gynaec Nri
Kichin Na-Adịgide Adịgide
ụdị ugu dị iche iche
ruturu na nnabata na ulo akwukwo
esi ntutu daa njikwa
amazon praịmarụ fim
edozi isi maka ntutu ntutu maka ụmụ agbọghọ
ndepụta nke 2011 Hollywood romance film fim